DAAWO: Eng.Yariisow oo ku hanjabay in uu Maxkamad soo taagayo Xubno katirsan Maamulka G/Banaadir & Shaqaale la eryayo…. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO: Eng.Yariisow oo ku hanjabay in uu Maxkamad soo taagayo Xubno katirsan Maamulka G/Banaadir & Shaqaale la eryayo….
DAAWO: Eng.Yariisow oo ku hanjabay in uu Maxkamad soo taagayo Xubno katirsan Maamulka G/Banaadir & Shaqaale la eryayo….
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) Yariisow ayaa sheegay in talaabo laga qaadayo shaqaalaha dowladda hoose gaar ahaan kuwa aan soo xaadirin shaqada iskana qaata mushaarka.
SAWIR: Duqa Muqdisho oo Gudoomiye Cusub u Magacaabay Degmada Hodan G/Banaadir..